ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ အေဘီစီ (ABC) မီနီ mart စတိုးဆိုင် အကြမ်းဖက်လုယက်ခံရ – Na Pann San
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ အေဘီစီ (ABC) မီနီ mart စတိုးဆိုင် အကြမ်းဖက်လုယက်ခံရ
6 , Apr , 2020
ဖြစ် စဉ် မှာ ( ၆ . ၄ .၂၀၂၀ ) နံနက် အစောပိုင်း ၂ နာရီ ဝန်းကျင် တွင် အမျိုးသား ( ၂ )ဦး ခေါက်ဆွဲပြုတ် ဝယ်ယူရန် ဟန်ဆောင်ပြီး ဓါး ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ကာ တာဝန်ကျ အရောင်းဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး (၂)ဦးအား ဆိုင် အတွင်းဘက် စတိုခန်းအတွင်း သို့အဓမ္မ ခေါ် ဆောင်သွား ခဲ့ သည်။
ယင်းနောက် အနီးရှိ အအေးပေး သေတ္တာ အတွင်း မှ ပုလင်းဖြင့် ရိုက်နှက် ပြီး ငွေများလုယူ ရိုက်နှက်ခံရခြင်းကြောင့် တစ်ဦးမှာ ဖူးရောင် မေ့မျောသွားပြီး တစ်ဦးမှာ အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်နှက် ခံရပြီး ဦးခေါင်းတွင် ဒဏ်ရာရရှိသဖြင့် နီးစပ်ရာ ပါရဂူ ဆေးခန်း တွင် ၅ ချက် ချုပ်ရကြောင်း သိရသည် ။ အခင်းဖြစ်ပွားပြီး တာဝန်ရှိသူများ လာရောက်စစ်ဆေးသွားကြောင်း သိရ သည် ။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် အနော်ရထာလမ်းနှင့် လမ်း ၅၀ ထောင့် ရှိ abc စတိုးဆိုင် (၂၄)နာရီရောင်းချနေသော မီနီ mart တစ်ခု အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရိုက်နှက်၍ ငွေ များ လုယူ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
REF: SANDAR HAN FACEBOOK
ဖွဈ စဉျ မှာ ( ၆ . ၄ .၂၀၂၀ ) နံနကျ အစောပိုငျး ၂ နာရီ ဝနျးကငျြ တှငျ အမြိုးသား ( ၂ )ဦး ခေါကျဆှဲပွုတျ ဝယျယူရနျ ဟနျဆောငျပွီး ဓါး ဖွငျ့ ခွိမျးခွောကျကာ တာဝနျကြ အရောငျးဝနျထမျး အမြိုးသမီး (၂)ဦးအား ဆိုငျ အတှငျးဘကျ စတိုခနျးအတှငျး သို့အဓမ်မ ချေါ ဆောငျသှား ခဲ့ သညျ။
ယငျးနောကျ အနီးရှိ အအေးပေး သတ်ေတာ အတှငျး မှ ပုလငျးဖွငျ့ ရိုကျနှကျ ပွီး ငှမြေားလုယူ ရိုကျနှကျခံရခွငျးကွောငျ့ တဈဦးမှာ ဖူးရောငျ မမြေ့ောသှားပွီး တဈဦးမှာ အကွိမျကွိမျ ရိုကျနှကျ ခံရပွီး ဦးခေါငျးတှငျ ဒဏျရာရရှိသဖွငျ့ နီးစပျရာ ပါရဂူ ဆေးခနျး တှငျ ၅ ခကျြ ခြုပျရကွောငျး သိရသညျ ။ အခငျးဖွဈပှားပွီး တာဝနျရှိသူမြား လာရောကျစဈဆေးသှားကွောငျး သိရ သညျ ။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ပုဇှနျတောငျမွို့နယျ အနျောရထာလမျးနှငျ့ လမျး ၅၀ ထောငျ့ ရှိ abc စတိုးဆိုငျ (၂၄)နာရီရောငျးခနြသေော မီနီ mart တဈခု အတှငျးသို့ ဝငျရောကျရိုကျနှကျ၍ ငှေ မြား လုယူ မှု ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ။
ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်း မီး (၂) ရက် အချိန်းပိုင်း ပျက်မည်
ကမ်းခြေမြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂါနာနိုင်ငံတွင် လူတစ်ဦးထဲကနေပြီး အခြားလူ ( ၅၃၃ ) ဦး ကို ကိုဗစ်ပိုး စံချိန်တင် ကူးစက်မှုဖြစ်ပွား